Daawo:-Maxaa sababay dagaalka Ciidanka Itoobiya & Kooxda Macawiisley? - Radio Risaala: Somali News Online
Home Maqal & Muuqaal Daawo:-Maxaa sababay dagaalka Ciidanka Itoobiya & Kooxda Macawiisley?
Daawo:-Maxaa sababay dagaalka Ciidanka Itoobiya & Kooxda Macawiisley?
Deegaanka Afqurun oo ku dhow degmada Farlibaax ee Gobolka Hiiraan waxaa dagaal culus uu ku dhexmaray Ciidamo Itoobiyaan ah iyo kuwa Kooxda Macawiisleyda,kaas oo sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Ciidamada Itoobiyaanka ee la dagaalamay Kooxda Macawiisleyda ah ayaa waxaa la sheegay inay kasoo gadoodeen Ciidamo kale oo ku sugan degmada Xudur ee Xarunta Gobolka Bakool.
Hadaba maxaa sababay inay dagaalamaan Ciidamada Itoobiyanka ah iyo Maleeshiyaadka Macawiisleyda ah?,waxaa su’aashaas iyo khasaaraha ka dhashay dagaalka ka wareysanay Maxamed Cali Istakiin oo sheegta in uu yahay Taliyaha Kooxda Macawiisleyda ee Gobolka Hiiraan.
Faahfaahin: dagaal gobolka Hiiraan ku dhexmaray ciidamo Itoobiyan ah iyo kooxda Macawisleey.
Posted by Risaala Media Corporation on Wednesday, 12 February 2020
Previous articleMareykanka oo xayiraaddii ka qaaday Shirkadda Al-Barakaad
Next articleDowlad Balan qaadey bixinta qeyb kamid ah deynta lagu leeyahay Somalia